3 Talaabo oo looga jawaabayo Dhibaatooyinka Dhibaatada Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
3 Tallaabo oo looga jawaabayo Dhibaatooyinka Dhibaatada Warbaahinta Bulshada
Khamiista, Noofembar 15, 2012 Talaado, Nofeembar 13, 2012 Douglas Karr
Waxaan wadahadal cajiib ah la yeelanay Steve Kleber oo ka tirsan Kleber & Associates, oo ah hay'ad diiradda saartay qaybta dhismaha guryaha. Mid ka mid ah mowduucyada laga wada hadlay ayaa ahaa cabsida laga qabo in shirkadaha ay ka gudbaan marka ay la tacaalayaan warbaahinta bulshada. Waa muhiim in la aqoonsado in markay dhibaato dhacdo - aad ayey ugafiican tahay inaad korka saarto jawaabtaada ee baraha bulshada halkii aad ka maqnaan lahayd gabi ahaanba.
3da talaabo ee looga jawaabayo dhibaatooyinka
Isla markiiba macaamilka ku deji adiga fahmaan dhibaatadooda. Xaqiiqdii, dib ugu celi iyaga si ay gabi ahaanba u ogaadaan inaad fahantay waxa qaldan. Haddii caddayntu hagaagsan tahay, halkaas ayay ku dhici doontaa. Macaamiisha waxay rabaan inay ogaadaan inaad dhageysaneysid you waxaadna leedahay hal fursad oo aad kuxalin karto dhibaatadan marka hubi inaad fahantay!
Hubso inay ogow inaad daryeesho. Adoo ka jawaabaya una sheegaya iyaga inaad shaqsiyan u daryeesho iyaga, waxaad hoos u dhigi kartaa xoojinta arinka oo hoos u dhigeysa oo aad shakhsi ka dhigeysaa Adigu mar dambe ma tihid sumad aan weji lahayn, waxaad tahay qof ay ku kalsoonaan karaan inay isku dayaan inay wax ka qabtaan dhibaatadaada.
Hagaaji dhibaatada. Ha siin foom, lambar taleefan ama cinwaan emayl si ay ula xiriiraan. Waa inaad hagaajisaa dhibaatada. Adiga. Haddii aad qofkan u cadayato qofka ku xiga, isla markiiba way kugu aqoonsan doonaan waxaad tahay ny indho adeyg. Haddii aad fahantay oo aad daryeesho, waad la socon doontaa oo waxaad hubineysaa in arrinta la xaliyay.
Taasi ma oranayso adiga, shaqsiyan, waa inaad saxdaa arrinta. Micnaheedu waa inaad tahay hogaamiyaha iyo qofka la xisaabtami kara macaamilka ama rajada. Waa masuuliyadaada inaad qofka u gudbiso qaraar. Hadaad iska tuurto oo aad ordo, waxay sababi doontaa arrimo badan. Majeceshahay dadka waawayn inay sidaa sameeyaan markaad arin leedahay… maxaad ugu samayn lahayd macmiilkaaga?
Ereygii ugu dambeeyay ee tan. Markaad xalliso dhibaatada, waxaad dhameystirtay mid ka mid ah ololihii ugu fiicnaa ee aad abid bilowdo. Haddaad qofkaas uga tagto isagoo faraxsan oo qanacsan, fursadaha ayaa ah inay la wadaagi doonaan guushaas shabakadooda. Taasi waa wax qurux badan.
Tags: maareynta dhibaatooyinkaqalalaasaha bulshadawarbaahinta bulshadadhibaatada warbaahinta bulshada
Jooji Qarsiga Muuqaalka ugu Muhiimsan ee Jiritaanka Shabakadaada
Nov 21, 2012 at 4: 13 AM
Qoraalka maqaalkani wuxuu ku habboon yahay waqtigiisii ​​markii aan furay 'Resilience Brand'. Tilmaamo waaweyn halkan waxaan ku siin karnaa macaamiisheenna
Nov 30, 2012 at 2: 02 AM
Tilmaamaha cajiibka ah iyo mahadsanid badan inaad wadaagto kan. Xaqiiqdii tani waxay caawin weyn u tahay qof walba. Shaqo wanaagsan!